Ngathi-ukuThengisa ukuThumela ngaphakathi kunye nokuThumela kwelinye ilizwe, Ltd.
Isalfure emnyama BR
Isalfure emnyama B
Isalfure emnyama yoLwelo
Ukuloba ngokuNgenisa ngaphakathi kunye nokuThumela kwelinye ilizwe, Ltd. yasekwa ngo-2004. Inkampani yethu ifumene i-ISO 9001: 2006 kunye ne-ISO 14000. Siqokelele amava atyebileyo okuthumela ngaphandle iimveliso zechemical zaseTshayina. Ngokusekwe kwisityalo esinamandla, siyakwazi ukuxhasa iSulphur eMnyama kunye nabaphakathi bayo kwintengiso yaphesheya.
Inkampani yethu ihoya uqeqesho lwabasebenzi, abasebenzi beshishini abanezakhono ekusebenzeni kweentlobo ezahlukeneyo zeemveliso zamachiza ezithunyelwa kumazwe angaphandle. Sinikezela ngemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo ngexesha labathengi bethu. Inkampani inethemba lokufuna ukukhula kunye nabahlobo abasuka phesheya kunye nasekhaya ngokusekwe kwintsebenziswano efanelekileyo kunye nezibonelelo ezifanayo. Sisoloko sibambelela kwizenzo zorhwebo lwamanye amazwe, sibambelela kwizivumelwano, sigcina isithembiso, inkonzo esemgangathweni, inzuzo kunye kunye nokuphumelela ifilosofi yeshishini, kunye neshishini, ishishini, icandelo lezemali liseke ubudlelwane obuninzi bokubambisana, ngokusebenzisa ubudlelwane obusondeleyo neChina kunye kwimarike yamanye amazwe. Inkampani yethu ifuna ukufuna uphuhliso kunye nabahlobo abasuka phesheya kunye nasekhaya ngokusekwe kwintsebenziswano efanelekileyo kunye nezibonelelo ezifanayo.
I-FORING ikhethekileyo ithumela ngaphandle iimveliso zechemical entle yaseTshayina. Isityalo sethu sinendlela ephezulu yokuvelisa iSalfure Emnyama B, iSalfure emnyama BR, i-2,4-Dinitrochlorobenzene kunye ne-2-Amino-4-nitrophenol. Indawo yesityalo yi-7000 yeemitha zesikwere kunye neSalfure emnyama yemveliso yonyaka malunga neetoni ezingama-10 000 ngonyaka. Inotyalo-mali olupheleleyo ezingama-36 ezigidi zeedola nangaphezulu kwama-300 abasebenzi.
Ngenxa yeemveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye nomthengi obalaseleyo, sizuze inethiwekhi yentengiso yehlabathi efikelela eSingapore, ePakistan, eVietnam, eIndiya nakumazwe amaninzi aseYurophu.
Idilesi: I-1211 ShangDe Plaza, Inombolo yesitalato i-8 Kangle, Shijiazhuang, China
ungaqhagamshelana nathi heer